မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ် ငြိမ်းချမ်းရေး ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အပေးအယူ မှန်သမျှကို မြန်မာအစိုးရက လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဦးအောင်မင်းက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ကိုရောက်စဉ် မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့က ကုလသမဂ္ဂဌာချုပ်ကို ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ ရောက်ရှိစဉ် ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ဖြေကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
9/22/2012 11:28:00 PM
ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ဦးဆောင်သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာက တရားစွဲ
ရန်ကုန်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီး အောင်ပန်းမြို့တွေမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ဦးဆောင်သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာက တရားစွဲလိုက်ပြီလို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အဖြစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ဆုံးဖြတ်ထားတာကို မြန်မာနိုင်ငံသား လူငယ်အဖွဲ့တွေက စုပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။
9/22/2012 09:23:00 PM
ပေါ်တာဆွဲတာ၊ အရပ်သားတွေကို နှိပ်စက်တာလို ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ် နာမည်ပျက်လာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီ ကြာခဲ့ပါပြီ
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ ချမှတ်မှုအပေါ် ဩဇာရှိတဲ့ ဝါရှင်တန် အခြေစိုက် မဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာေ လ့လာရေးဌာန (Center for Strategic and International Studies – CSIS) က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ စစ်ရေးအချိတ်အဆက်တွေ ပိုအားကောင်းအောင် လုပ်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပြီး များမကြာခင် မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ Read more »
မညီညွတ်သူတွေ ချန်ခဲ့မည်ဟု NLD ပြော
၆၅ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျင်းပနေသည့် NLD အဖွဲ့ဝင်များ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီက ညီလာခံခေါ်ယူရေး ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်တွင် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပွားနေပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ တင်းမာနေသူများကို ချန်ခဲ့တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
9/22/2012 09:05:00 PM
မြောက်ဦးမြို့တွင် အိမ်ခြံဈေး နှစ်ဆမြင့်တက်
မြောက်ဦးမြို့ဝင် တနေရာ (ဓာတ်ပုံ – နိရဉ္ဇရာ)
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့်လနှင့် ယခုလအတွင်း အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူသူ များပြားလာမှုကြောင့် ဈေး တက်လာနေသည့်ဟု ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရက မြောက်ဦးမြို့ကို ရှေ့ဟောင်း သမိုင်းဝင်မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များက ဈေးပေးဝယ်လာသောကြောင့် အိမ်ခြံမြေဈေး မှာ နှစ်ဆခန့် မြင့်တက်လာေ နကြောင်း မြောက်ဦးမြို့ခံ ဦးသူရက ပြောသည်။
9/22/2012 09:04:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံအမတ်ကြီးက 'ဘင်္ဂါလီ'ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းကို ဆက်လက်မသုံးစွဲရန် မေတ္တာရပ်ခံ
ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော ရခိုင်အရေးကိစ္စ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံအမတ်ကြီးက 'ဘင်္ဂါလီ'ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းကို ဆက်လက်မသုံးစွဲရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့မှ ခိုးဝင်လာသူများဟု သုံးနှုန်းလိုပါက သုံးနှုန်းနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Read more »
9/22/2012 09:02:00 PM
ကမ္ဘာ့အကျိုးဆောင် နိုင်ငံသားဆု ဒေါ်စု လက်ခံယူ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တခုကို ရွေးချယ် လုပ်နေတာသာဖြစ်ပြီး ဒါကို စွန့်လွှတ်အနစ်နာ ခံတာလို့ မယူဆတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့မှာ အခြေစိုက်တဲ့ Atlantic Council အဖွဲ့က ပေးအပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကျိုးဆောင် နိုင်ငံသားဆု လက်ခံရယူခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုလို ပြောသွားတာပါ။ မနေ့က ဒီ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားအကြောင်းကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြထားပါတယ်။
9/22/2012 08:51:00 PM
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းကျောင်းအုပ် ဦးကျော်စိုးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြောင်းလဲလာသော ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသစ်နှင့်အတူ အစိုးရ၏ နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ ပုံစံ မျိုးစုံဖြင့် လွှဲပြောင်း ပေးလျက် ရှိရာ ယခု လူအများ စိတ်ဝင်စားနေသည့် တယ်လီဖုန်း ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ပိုင်ခွင့် ရမည့် စီးပွားရေး သမားများ၊
လတ်တလော ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေများနှင့် ရေးဆွဲထားသည့် မီဒီယာ ဥပဒေသစ်များ အကြောင်း၊ မကြာမီက ပြည်သူများ အကြား ရေပန်းစားနေသည့် ရှစ်သောင်း၊ တစ်သိန်း သုံးသောင်းတန် ဖုန်းများ စက်တင်ဘာတွင် ထွက်ပေါ်မည်ဟူသည့် သတင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး Read more »
9/22/2012 05:42:00 PM
ချစ်သူတို့ချစ်ကြရာဝယ် . . (မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်မထပ်ဘဲ အတူနေထိုင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရေး ပညာပေးဆောင်းပါး)
ကမ္ဘာကြီး ကျဉ်းမြောင်း လာမှုနှင့် အတူ နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု၊ အတွေးအခေါ်နှင့် အယူအဆများသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် စိမ့်ဝင်လာသည်။ ထိုစိမ့်ဝင် လာမှုများတွင် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုက်ညီမှု
များရှိသကဲ့သို့ မကိုက်ညီ သည်များလည်း ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် လက်မထပ်ဘဲ အတူနေထိုင်ခြင်း ကို အနောက်နိုင်ငံ အများအပြားတွင် မထူးဆန်းသော အဖြစ်အပျက် အဖြစ် ရှုမြင် ကြသော်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံတွင်မူ လက်မထပ်ဘဲ အတူ နေထိုင်ခြင်းကို မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ချိန်ထိုးကြည့်ရာ၌ အများစု က လက်မခံ နိုင်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
9/22/2012 03:59:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး(၂)ရက်အကြာ ကိုကိုကြီး(၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ)အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှနုတ်ထွက် ဟုသတင်းထွက်
From-Ponnya Swe Facebook
9/22/2012 03:55:00 PM
မြိတ်တွင် ၈၈ အဖွဲ့ အတုပေါ်
ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံနှင့် ပတ်သက်၍ မြိတ်မြို့တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဟုဆိုကာ အဖွဲ့တု တစ်ခုပေါ်ပေါက်နေကြောင်း မြိတ်မြို့အခြေစိုက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့က ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံဆောက်လုပ်မည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများက စိုးရိမ်နေချိန်တွင် ယင်းအဖွဲ့သည် ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံ၏ ကောင်းကျိုးများကိုသာ လူထုကို ပြောဆို စည်းရုံးနေကြောင်း အထက်ပါ အဖွဲ့မှ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ဦးအောင်နိုင်ဦးက
ရှင်းပြသည်။ Read more »
9/22/2012 03:52:00 PM
ပြည်သူပိုင် လယ်ကွင်းများအတွင်း KIA မှမိုင်းထောင်ထား
မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ နန့်ဟိုင်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လယ်ကွင်းများနှင့်
လယ်တဲများတွင် ကေအိုင်အေအဖွဲ့ မှ မိုင်းများ ထောင်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
KIA အဖွဲ့မှ နန့်ဟိုင်းကျေးရွာအနီးရှိ လယ်ကွင်းများနဲ့ လယ်တဲများတွင်
မိုင်းထောင်ထားပြီး လယ်ကွင်းများ ဘက်သို့ မည်သူမျှမလာရန် အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်း
9/22/2012 03:50:00 PM
နံမည်ကြီး သတင်းသမား သောမတ်စ်ဖူလာ မုံရွာမှာ ယာယီ ထိမ်းသိမ်း တားမြစ်ခံရ သတင်းဆောင်းပါးရှင် သောမတ်စ်ဖူလာ၊ ဓာတ်ပုံ-International Herald Tribune
International Herald Tribune ရဲ့ နံမည်ကြီး သတင်းသမား သောမတ်စ်ဖူလာနဲ့ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံသမား တဦးတို့ဟာ မုံရွာ
မြို့က အပြန် မြို့အထွက် ဂိတ်မှာ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ အာဏာပိုင်တွေက တားမြစ်ကာ ယာယီထိမ်းသိမ်းတာ ခံလိုက်တယ်လို့ မုံရွာ ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့ အစည်းက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
9/22/2012 03:48:00 PM
မန္တလေး မြို့တော်ဝန် ဆန္ဒပြနေသူများကြားပိတ်မိနေ
စက်တင်ဘာလ၂၂ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ကျူးကျော်အိမ်ယာတွင်နေထိုင်ကြသူများက လာရောက်ေ တွ့ဆုံေ ဆွးနွေးသောမြို့တော်ဝန်အား ၀ိုင်းဝန်း ပိတ်ဆို့ကာ ဆန္ဒပြလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မန္တလေးမြို့တော်ဝန်က ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် မကွေးကျောင်းတိုက်တွင်ဒေသခံများအား သွားရောက်ေ တွ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
9/22/2012 02:30:00 PM
ဒေါသထွက်နေသော တရုတ်လူအုပ်က အမေရိကန် သံအမတ်ကို ၀ိုင်းတိုက်ခိုက် ဘေဂျင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၀
ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကန့်ကွက်လျက် ရှိသောကျွန်းကို ဂျပန်ကလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြသနေမှု အတွက် ဂျပန်ဘက်မှ ဘက်လိုက်သည်ဟု အမေရိကန်ကို ဒေါသ ထွက်နေသောလူအုပ်ကြီးက အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး စီးနင်း လိုက်ပါလာသော ကားကို ဝိုင်းဝန်း တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြကြောင်း Telegraph သတင်းတစ်ရပ်က ဖော်ပြထားသည်။
9/22/2012 02:10:00 PM
ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ပူးပေါင်းရန် ၈၈ အဖွဲ့ကို ဧရာဝတီ တိုင်းလွှတ်တော် ဖိတ်ခေါ်
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း / ဧရာဝတီ)
ပြည်သူ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ပြည်သူတို့၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအား လက်တွဲဖြေရှင်းသွားရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်က ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဆင့်နှင့် ကိုဂျင်မီ ဦးဆောင်သည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့တို့ ပုသိမ်မြို့ရှိ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ကြရာတွင် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ထိုသို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
9/22/2012 01:35:00 PM
Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုကြာင့် မြိတ်လေဆိပ်မှ ဆက်မထွက်နိုင်
့မှ ကော့သောင်းမြို့ သို့ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် ( ယနေ့ ) နံနက် ၆ နာရီတွင် ထွက်ခွါသွားသော Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုကြာင့် မြိတ်လေဆိပ်မှ ဆက်မထွက်နိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ “ အင်ဂျင်ပါဝါကျတယ်လိုတော့အကျဉ်းဖျင်းသိထားတယ်
။ အခုမြန်မာ့လေကြောင်းက M-16 လေယဉ်ငှား ထားပြီးကော့သောင်းထိ ပို့ ပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်” ဟုAir KBZ လေကြောင်းလိုင်း မြိတ်ရုံးခွဲမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
9/22/2012 01:19:00 PM
ABC ဘီယာအရောင်းမြှင့်တင်ပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ မြန်မာမလေးများ လိုတာထက် ပိုဖော်နေ Read more »
9/22/2012 12:56:00 PM
ဟော်နန်းကို အဝေးမှ မြင်ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ဆင်ငိုမြက်များ ဖုံးနေသောခြံအ၀င် လမ်းလေးနှင့် အဖြူရောင် ဆေးသားပြယ်လွင့်နေ သည့် သော့ခတ်ထားသော သံတံခါး ကြီးကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဤခြံသည် လူအ၀င်အထွက် နည်းပါးမှန်း သိသာလှ၏။
တူရကီ အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှု စီရင်ချက်ချ တူရကီနိုင်ငံမှာ အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုးစားမှုနဲ့ စွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်း စစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ စစ်အရာရှိဟောင်းများ တရားခွင်သို့ လာရောက်စဉ်
တူရကီနိုင်ငံမှာ အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုးစားမှုနဲ့ စွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းနေကြသူ စစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ စစ်အရာရှိဟောင်းပေါင်း စုစုပေါင်း ၃၃၀ လောက်ကို တရားရုံးတခုက ပြစ်ဒဏ် ချလိုက်ပါတယ်။
9/22/2012 11:46:00 AM
ပြည်ပအကူအညီ အဟောသိကံ မဖြစ်စေသင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် UNရုံးချုပ်တွင် မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကုလသမဂ္ဂမှာ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းနေကြတဲ့ မြန်မာဝန်ထမ်းတွေ၊ မြန်မာပြည်က တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂအငြိမ်းစား မြန်မာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုတွေ့ဆုံရာမှာ အမိနိုင်ငံအတွက် ကောင်းကျိုးပြုပေးကြဖို့ တိုက်တွ န်းပြောကြား ခဲ့သလို၊ ပြည်ပအကူအညီကို ဘယ်လိုရယူသင့်သလဲဆိုတာကို အပြန်အလှန်ေ ဆွးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဦးကျော်ဇံသာက ဆက်ပြီး ပြောပြပေးပါမယ်။
9/22/2012 11:44:00 AM
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ပုသိမ် NLD အများစုပါတီမှ နှုတ်ထွက်ရန် ပြင်ဆင်
ပုသိမ်မြို့၊ စကားဝါလမ်းရှိ NLD နာယက ဦးတင်ဦးကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော
မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ NLD ရုံးအား တရားမ၀င်ကြောင်းနှင့် ပုသိမ်NLD ပါတီဝင်များထောက် ခံသော ခေါင်းဆောင်(၃)ဦးအား ပါတီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သော ဗဟိုမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုကြောင့် ပုသိမ် NLD ပါတီဝင်အများစုမှာ ပါတီဝင် အဖြစ် မှ နှုတ်ထွက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒီစာတွေကို မယုံပါဘူး၊ ဒီလှိုင်းဂျာနယ်မှာပါပေမဲ့လည်း ဘယ်သူ ထုတ်ပြန်ကြောင်းကို အမည် မတပ်ထားတဲ့အတွက် ပါတီကို ဖြိုခွဲဖို့ ကြံစည်နေတဲ့သူတွေက လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ စာတွေလို့ပဲ မြင်ပါတယ်” ဟု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပုသိမ် လူငယ်ခေါင်းဆောင် အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သောဦးမြင့်စိုးက ပြောသည်။
9/22/2012 11:42:00 AM
တပ်သိမ်းမြေများ ပြန်ရရေး လယ်သမားများ တောင်းဆို
တပ်မြေအဖြစ်သိမ်းယူရန် ကျောက်တိုင်စိုက်ထူထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တောင်ယာတခု (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ) ပဲခူးတိုင်း ပဲခူးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ခဲယမ်းမီးကျောက်တပ် (ACD) က သိမ်းယူခဲ့သော လယ်မြေများကို မူရင်းပိုင်ရှင် လယ်သမား များက ပြန်လည်ရရှိရေး
ခဲယမ်းမီးကျောက်တပ် (ACD) က ၁၉၉၇-၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက တပ်တည်ဆောက်ရန်နှင့် တပ်ရန်ပုံငွေအဖြစ် အနီးရှိ ကျေးရွာ ၉ ရွာနှင့် လယ်ဧက ၅၀၀၀ ကျော်ကို သိမ်းယူခဲ့ပြီး တပ်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်၍ ပိုလျှံသော လယ်မြေများအား မူရင်း ပိုင်ရှင်လယ်သမားများကို သီးစားခယူ၍ အငှားချ လုပ်ကိုင်စေခဲ့ကြောင်း လယ်သမားများက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
9/22/2012 11:11:00 AM
အမေရိကန်-မြန်မာ စစ်ရေး ပူးပေါင်းရန် စကားစပြော
၂၀၁၂ ခုနှစ် ရွှေမြွေဟောက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရာမှာ တွေ့ရတဲ့ ထိုင်းစစ်သားများ (ဓာတ်ပုံ – US Marine Corps)
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ စစ်ရေးပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ တပ်မတော် အရာရှိများကို သင်တန်းပေးဖို့ အလားအလာတွေကို အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာ စစ်ဘက် အရာရှိတွေ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းနေကြပြီလို့ Financial Times က ယနေ့ သတင်း ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေသာမက အရပ်ဘက်လုံခြုံရေးအရာရှိတွေပါ တက်ရောက်တဲ့ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အမေရိကန် ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးမှူးများ ရုံးနဲ့ လက်ထောက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများရုံးက အရာရှိတွေပါ တက်တယ်လို့ သတင်းက ဆိုပါတယ်။
9/22/2012 11:09:00 AM
ပန်းတနော် ကြံ့ခိုင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆန္ဒပြမည်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့နှင့် ပန်းတနော် ဒေသခံများ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ကြယ်ပြာ / ဧရာဝတီ)
ဧရာဝတီတိုင်း အတွင်း မိုးများ၍ရေကြီးခဲ့သော ပန်းတနော်၊ ဓနုဖြူ နှင့် ညောင်တုန်းမြို့နယ်များ၌ နှစ်လခန့်ကြာမြင့်သည့် ယခုအချိန် ထိ ရေများ မကျဆင်းရသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ပန်းတနော်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပိုင်ဆိုင် သည့် အင်း များကြောင့် ဆိုသည့်အချက်ဖြင့် ဒေသခံ အင်အား ၂ သောင်းခန့်က ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်နေကြသည်။
9/22/2012 11:07:00 AM
ကွမ်းယာဆိုင်များတွင် ရောင်းချဆဲ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည့် အိန္ဒိယကွမ်းယာထုပ်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှတင်သွင်းလာသော ကွမ်းယာ အထုပ်ငယ်များ အား မြန်မာနိုင်ငံအနှံရှိ ကွမ်းယာဆိုင်အများ အပြားတွင် ရောင်းချမှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူများ၏ကျန်းမာရေးအတွက် စီစစ်တားမြစ်မှု များပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ပြည်သူများထံက သိရှိရသည်။
ထိုအိန္ဒိယကွမ်းယာအခြောက်ထုပ်များမှာ ထိုနိုင်ငံတွင်ပင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်သည့် ရာခိုင်နှုန်း တိုးပွားစေသည့်အတွက် ပိတ်ပင်ခံထားရသည့် ကွမ်းထုပ်များဖြစ်သည်။
ချယ်ရီကားများနေရာတွင် ဈေးကျလာသည့် ပရိုဘောက်အစားထိုးဝင်ရောက်
လူကြိုက်များခဲ့သောချယ်ရီဝက်ဂွန်ကားများမှာ ဟံသာဝတီကားရောင်းဝယ်ရေးစခန်းများတွင် အရောင်းအ၀ယ်နည်းပါး လာပြီး ချယ်ရီကဲ့သို့ တက္ကစီဆွဲ၍ရသော ပရိုဘောက် (Probox)ကားများမှာ ရေပန်းစားလျက်ရှိကြောင်း ကားအကျိုးတော်ဆောင်များထံက သိရသည်။
“Probox တွေက ဆီစားလည်း သက်သာတယ်၊ တက္ကစီအဖြစ်လည်း မောင်းလို့ရတယ်၊ အိမ်စီးကား အဖြစ်လည်း သုံးလို့ရတော့ များများတင်သွင်းလာကြတယ်” ဟု ဟံသာဝတီကားရောင်းဝယ်ရေးစခန်းမှ ကားပွဲစားလုပ်သက် (၂၀) ကျော်ခန့်ရှိသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
9/22/2012 10:47:00 AM
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အိမ်ထဲမှာ သံကြိုးခတ်ခြင်း ခံထားရသူ စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရလို့ သံကြိုးနဲ့ အိမ်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် နေရသူ ဟောင် ချန်လင်း၊ ဓာတ်ပုံများ- Quirky China News
မိခင်တဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်ရင်က လွယ်မွေးထားတဲ့ သားဖြစ်သူကို အိမ်ထဲမှာဘဲ နှစ်ပေါင်း ၂၁ နှစ်ကျော် သံကြိုးနဲ့ ခတ်ထားတယ်ဆိုရင် သာမန်အားဖြင့် မယုံနိုင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျန်စုပြည်နယ်၊ နန်ကျင်းမှာ တကယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ အသက် ၇၁ နှစ်ရှိ ချန်ကြုဖန် ဆို တဲ့ မိခင်က အသက် ၃၇ နှစ်ရှိ သားဖြစ်သူ ဟောင် ချန်လင်းကို သူ ၁၆ နှစ်သား
ကတည်းက သံကြိုးခတ်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ထားခဲ့ပါတယ်လို့ မေးလ် အွန်လိုင်း သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Read more »
9/22/2012 10:44:00 AM
ကြေးမုံ စာတည်းမှူးချုပ်၏ မေဇွန်ကိစ္စ ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ပန်ကြားချက်
ကြေးမုံ သတင်းစာရဲ့ စာတည်းမှူးချုပ်ကတော့ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မေဇွန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက် တာ စေတနာရဲ့ ဆောင်းပါးဟာ တရားရုံးက စစ်ဆေးခြင်း မပြုမီကြိုင်တင်ပြီး ဆေးပညာ ရှု့ထောင့်က သုံးသပ်တင်ပြထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူများကို အကြောင်းပြန်ကြား ချက် ထုတ်ပြန်လာပါပြီ။ Read more »
9/22/2012 10:43:00 AM
မန္တလေး ဈေးချိုကို မီးရှို့ဖို့ ကြိုးစားသည့်ဖြစ်ရပ်အမှန်သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြ
9/22/2012 10:42:00 AM
ငါးမန်းများ တိုက်ခိုက်မှုအား တံငါသည်နှစ်ဦး ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ အင်္ဂလန် ရေလက်ကြားအတွင်း ရောက်ရှိခဲ့သည့် တံငါသည်နှစ်ဦးသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ငါးမန်းများ၏ ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာ တိုက်ခိုက်မှုများကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဂရေမီပူလန်နှင့် ဝိန်းကွမ်ဘန်းတို့သည် ၎င်းတို့ စီးနင်းလာသည့် အရှည်(၁၇)ပေရှိသော လှေကို ငါးမန်းများက တိုက်ခိုက်မှုကို မှတ်တမ်းဗီဒီယို ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကွန်းဝဲလ်ဒေသအနီး ဖဲလ်မော့သ် ကမ်းလွန်တွင် ပူလန်တို့
လှေသည် Blue Sharkအမျိုးအစား ငါးမန်းအုပ် တစ်အုပ်၏ အလယ်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ Read more »
9/22/2012 10:37:00 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားဖြစ်၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ဒီကလက်ခ် ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နှင်. မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန် သည် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ က ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦးဖြစ်သည်. တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားနှင်. သမ္မတဟောင်း ဒီကလက်ခ် တို.နှင်.တူကြောင်း မြန်မာအစိုးရ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဆိုလိုက်သည်။
9/22/2012 10:33:00 AM
ကချင်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသော်လည်း ငြိမ်း ချမ်းရေးမရနိုင်သေးခြင်းမှာ KIO ခေါင်းဆောင်များအတွင်း သဘောထားနှစ် မျိုးဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ် ပါတယ်၊ အစိုးရဘက်မှ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းဟာ KIO နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်၊ အစိုးရက စိတ်ရှည်
အလျှော့ပေးညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ သတင်းတွေကဆိုပါတယ်၊ ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ အစိုးရက စစ်တပ်ကို ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်မဆင်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ကချင်ပြည် နယ်နေရာအနှံ့စစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုံးဝရပ်တန့်သွားပါတယ်၊ ဒီအခြေအနေမှာ KIO က တစ်စခန်း ထလာပါတော့တယ်၊ ကြောင်မရှိလို့ ကြွက်ထတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။ Read more »
9/22/2012 01:11:00 AM
စက်သုံးဆီ သယ်ဆောင်တဲ့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတွေကို ကိတ်မုန့်ကုန်ချောက်များ တင်ဆောင်ရောင်းချခိုင်း
စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့က လိုင်ဇာမှ ဒေါ့ဖုန်းယန်- မိုးမောက် - ဗန်မော် မြို့များသို့ စက်သုံးဆီနှင့်
ကုန်ပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်ရောင်ချလျက်ရှိတဲ့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတွေကို ခလားတောင်နဲ့ လိုင်ဇာအနီး
မှာ တပ်စွဲထားတဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ တားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး မှာကြားခဲ့တယ်လို့
9/22/2012 01:10:00 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ
9/22/2012 12:44:00 AM
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် USIP ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့က Mr Jason Gluck ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ နေ့လည်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦးနဲ့ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ကို ရွှေဂုံတိုင်လမ်း NLD ဌာနချုပ်မှာ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
9/22/2012 12:10:00 AM
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကြိုဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှုတွေ လာရောက်မြှုပ်နှံတာကို ကြိုဆိုကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ Nanning မြို့မှာ (၉) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲ
ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း သူကအခုလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone5အာရှမှာ စတင်ရောင်းချ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့က Apple အရောင်းဆိုင် တခုမှာ iPhone5စတင်ရောင်းချနေစဉ်။
Apple ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို နှစ်သက်ကြတဲ့ အာရှတိုက်သားတွေ ကာလကြာရှည်စောင့်စားနေကြတဲ့ iPhone5လက်ကိုင်ဖုန်းကို ပထမဆုံး စတင် ကိုင်ခွင့်ရနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန် အလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးက သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် Smart လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို သောကြာနေ့မှာ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ စတင်ဖြန့်ချီလိုက်ပါပြီ။
9/22/2012 12:08:00 AM
ဒေါ်စုနဲ့ ကုလအတွင်းရေးမှုးချုပ် တွေ့ဆုံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမေရိကန်စံချိန် ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ နယူးယောက်မြို့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး၊ ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းပွဲတခုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
9/22/2012 12:06:00 AM